Nkwado Borg: Ezigbo System Management System | Site na Linux
Ihe niile ọrụbụrụ otu nkịtị, dị elu ma ọ bụ na teknụzụ, ị kwesịrị ị na-agbalị ka ị na- Sistemụ arụmọrụ, obughi nani emelitere, kamakwa echebe ya ihe egwu cyber na ihe merenụdị ka nje virus, enweghị ikike intrusions, mmebi ngwaike, na ele mmadụ anya n'ihu ma ọ bụ ngụkọta ọnwụ nke data, na nchekwa nchekwa.
Maka nsogbu ikpeazụ a ekwuru, enwere ọtụtụ ngwanrọ ngwanrọ (programmụ / ngwa) dịịrị nke anyị Sistemụ arụmọrụ free na-emeghe, dabere na GNU / Linux. Na otu n'ime ha, a kpọrọ Ndabere Borg, Ọ dị mma ndabere management system.
Karịsịa, mbipụta nke nkwado ma ọ bụ nkwado, ma ọ bụ usoro ọ bụla ọzọ maka «Tọgharia, tọgharịa, weghachi ma ọ bụ nanị laghachi na mbụ ma ọ bụ nke ndabere steeti anyị GNU / Linux Distros»Gụnyere ozi (nke onwe ma ọ bụ ọrụ) echekwara, ọ na-abụkarị isi okwu dị oke mkpa maka ndị ọrụ GNU / Linux, n'ihi na n'ozuzu ha, ha na-anwale nhazi ma ọ bụ ngwa ọhụụ ọhụụ, yana ndị ọzọ nwere oge, GNU / Linux Distros nke oge. .
1 Njikọ posts
1.1 Ihe Dị Mkpa Banyere Backups
2 Nkwado Borg: Sistemụ Njikwa ndabere
2.1 Gịnị bụ Borg ndabere?
2.2 Atụmatụ na Akụkọ
2.2.1 Isi atụmatụ
2.3 Ndị ọzọ dị mkpa data
2.4 Gịnị bụ Mbugharị?
Ihe kpatara, na Blog Site Linux Anyị emebuola akwụkwọ ndị ọzọ metụtara isiokwu a nke anyị na-akwado ịchọọ na ịgụ. Otu obere ihe atụ nke ụfọdụ n'ime ha bụ ndị a:
Otu esi eme ndabere data na akụrụngwa site na iji Shell Scripting?
Ndị ọzọ ngwa ndị na-atọ ụtọ ma bara uru, nke bara uru banyere: Deja Dup, Rsyncma Aptik.
Ihe Dị Mkpa Banyere Backups
Mgbe ị na-eme ihe aga-eme ma ọ bụ mmemme, iji kpuchido ozi anyị (data) yana sistemụ arụmọrụ, ezigbo omume n'okwu a, ọ na-abụkarị n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, mesie iwu a maara dị ka «3-2-1 ″, n'ihi na o guzobere ụkpụrụ ndị a iji rube isi:
Nwee ihe atọ (3) nkwado ndabere nke ihe niile akwadoro.
Chekwaa nkwado ndabere abụọ (2) na ọnọdụ dị iche iche dị n'ime.
Chebe ma ọ dịkarịa ala otu (1) nke nkwado ndabere na mpaghara saịtị.
Nkwado Borg: Sistemụ Njikwa ndabere
Gịnị bụ Borg ndabere?
Ndabere Borg, dị ka ndị mmepe ya si dị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, bụ:
"A deduplication ndabere program. Optionally, ọ na-akwado mkpakọ na authenticated na izo ya ezo. Ebumnuche nke onye bụ inye ụzọ dị mma ma dịkwa nchebe iji mepụta data nke nchekwa. Usoro ntinye ederede data ejiri mee Borg kwesịrị ekwesị maka nkwado ndabere kwa ụbọchị dịka naanị mgbanwe na-echekwa. Usoro nyocha a na-enyocha na-eme ka ọ dabara maka ịkwado ihe ezubere iche na-enweghị ntụkwasị obi".
Atụmatụ na Akụkọ
Oruoju nchekwa nke disk ohere: Na-eme a deduplication dabere na ọdịnaya-kọwaa chunking nke a na-eji iji belata ọnụ ọgụgụ nke bytes echekwara: ebe faịlụ ọ bụla na-ekewa n'ime ọnụ ọgụgụ nke agbanwe-ogologo chunks na naanị iberibe na mgbe agbakwunyere agbakwunyere na repository hụrụ tupu .
Ọsọ: O nwere arụmọrụ magburu onwe ya n'ihi na etinyere koodu ya dị oke egwu na C / Cython, na-eme faịlụ / data nchekwa data mpaghara, ma na-arụ ọrụ nke ọma nke faịlụ enweghị faịlụ.
Izo ya data: Na-enye gị ohere iji zoro ezo AES 256-bit iji chebe data niile, ebe ikwesị ntụkwasị obi na izi ezi nke data gosipụtara site na iji HMAC-SHA256. Na data ahụ ezoro ezo n'akụkụ ndị ahịa.
Mkpakọ: Nhọrọ na-eme ka mkpakọ nke data niile, na usoro ndị a: lz4 (nnukwu ngwa ngwa, obere mkpakọ), zstd (dịgasị iche iche site na nnukwu ọsọ na obere mkpakọ na mkpakọ dị elu na obere ọsọ), zlib (usoro ọsọ ọsọ na mkpakọ), na lzma (obere ọsọ, mkpakọ dị elu).
Ndabere mpụga: Na-enye gị ohere ịchekwa data na ndị ọbịa ọ bụla nwere ike ịnweta site na SSH. Ọzọkwa, ọ na-enyere nkwado ndabere na mpaghara ka etinyere ya dị ka sistemụ faịlụ.
Mfe echichi na ọtụtụ nyiwe: Ọ na-enye ọnụọgụ abụọ (installers) nke anaghị achọ ka arụnyere, naanị na-agba ọsọ ma jiri ya, na nyiwe ndị a: Linux, Mac OS X, FreeBSD, na ndị ọzọ, dị ka Windows 10 Linux Subsystem (Na ụdị nnwale).
Free na-emeghe iyi software: A na-enye ya ikikere n’okpuru ikikere BSD (nkebiahịrị atọ).
Ugbu a ọ na-aga site mbipute nọmba 1.1.1, nke na-eweta n'etiti ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ ndị a:
Gụnyere mmezi na usoro Mbugharị site na Borg 1.0.x na 1.1.x
Ewepu WSL autodetection (Windows 10 Subsystem maka Linux).
O meela ngwugwu lz4 ka ihe dị na 1.9.2 na nke zstd na ụdị 1.4.4
Tinye nkwado maka nyiwe na-enweghị os.link (eg gam akporo na Termux)
Na-agbakwunye nkwado maka nyiwe Linux na-enweghị sync_file_range.
Ndị ọzọ dị mkpa data
para Ndabere Borg, nke bụ mmemme Ọnụ (CLI) e kere Eserese eserese (GUI) maka mma ojiji. N'ime ndị a anyị nwere:
Borgweb: Maka Linux
Vorta Ndabere Onye Ahịa: Maka Linux, MacOS na Windows.
Maka ozi ọzọ na Borgweb y Vorta ị nwere ike ịga na saịtị ha GitHub. Otú ọ dị, BorgWeb nwere a nchekwa ọzọ na ndi ozo mkpa weebụsaịtị n'oge na-adịghị anya ga-enye ọtụtụ ozi gbasara ya.
Gịnị bụ Mbugharị?
Ọ bụ a ndabere Usoro na na ewepu oke data echekwara, na-edokọ otu ihe ndekọ nke otu data ahụ, na iji akara aka na-atụ aka maka otu akwụkwọ ahụ iji dochie anya ya. Ya mere, usoro a na-echekwa faịlụ ahụ naanị otu ugboro wee dochie ndị ọzọ na njikọ na faịlụ ahụ, ma ọ bụ ihe na-egosi gị otu otu. Usoro a na-enweta ịzọpụta ohere nwere site na nkwado ndabere na mpaghara, nke na-eme ka ojiji nke oghere na ụgwọ ndị metụtara mgbasa ozi ndị a ka mma, na mgbakwunye na ikwado ngwa ngwa data mgbake si oyiri (ndabere).
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Borg Backup», a ezigbo free na-emeghe ndabere management usoro, nnọọ vasatail na oru oma; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Nkwado Borg: Ezigbo System Management System